Nei Jesu akanyora pasi kaviri apo maJuda aida kutaka mukadzi nemabwe?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nei Jesu akanyora pasi kaviri apo maJuda aida kutaka mukadzi nemabwe?
Nei Jesu akanyora pasi kaviri apo maJuda aida kutaka mukadzi nemabwe?
Ngatiedzei kunzwisisa chiitiko ichi. Nekubatanidza mavhesi eBhaibheri akasiyana-siyana pamwechete.
Jesu paanotaura kana kuita chimwe chinhu chisingajairiki zvinenge zvichireva kuti anenge achitipa muono wakadzama mune zvimwe zvinhu zviri muhurongwa hwaMwari hukuru kurudzi rwevanhu.
Chiitiko ichi chaive chakareruka kwazvo. Vanyori nevaFarise vakaronga kumuteya vachishandisa mukadzi mutadzi. Kana iye akati vaikwanisa kutaka mukadzi mutadzi uyu nemabwe aizove aterera murairo waMosesi, asi anenge asisiri Muchinda weHupenyu nekuti anenge apa mutongo werufu. Kana akati havafaniri kumutaka nemabwe, anenge arwisa Mosesi achiputsa Murairo. Saka nenzira idzi dzese vakafunga kuti vaive vamubata mumuteyo wavo.
Vakaisa mukadzi aive achitya kwazvo kuna Jesu. Aive arinemhosva yehupombwe. Rufu rwake runorwadza rwekutakwa nemabwe rwaive rwakanyorwa pazviso zvevanhu ava. Vaida kupihwa mvumo yekuuraya.
Nekuva vanyengeri, vakanyepedzera kuti vaive vatevera nhano nenhanho dzekutongwa kwake.
Johane 8:4 Vakati kwaari: Mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva, ipapo pamene.
5 Zvino Mosesi wakatiraira pamurairo kuti vakadaro vatakwe namabwe; zvino imi munoti kudiniko?
6 Vakareva izvozvo, vachimuidza, kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe sousingavanzwi.
Akabva aita chinhu chaiyevedza asi chakavanzika.
Akakotama akanyora pasi nemumwe wake. Akaita seaisavanzwa seaive ega ivo vasipo.
Izvi zvinotidzorera kuna Mosesi paGomo reSinai paaive ega pamusoro pegomo kuti apihwe gumi remitemo.
Chii panyika Jesu chaaiedza kuvaudza, uye isu?
Vaiedza kumubata pamubvunzo wakachenjera waive pamusoro peMurairo waMosesi. Gumi remitemo rakataura pamusoro pekufeva. Saka apa ndipo paive nenyaya yese.
Kushandisa munwe wake kunyora pasi zvinotidzorera kumunwe waMwari Baba wakanyora gumi remitemo pamabwe.
Saka Jesu ari kutaura kuti kudii?
EKSODO 31:18 Zvino wakati apedza kutaura naMosesi pagomo reSinai, akamupa mahwendefa maviri echipupuriro, mahwendefa amabwe akanga akanyorwa nomunwe waMwari.
EKSODO 32:15 Zvino Mosesi akatendeuka akaburuka pagomo, ana mahwendefa maviri echipupuriro muruoko rwake; mahwendefa akanga akanyorwa nhivi dzawo dzose, akanga akanyorwa seri neseri.
16 Mahwendefa iwayo rakanga riri basa raMwari, norunyoro rwakanga ruri runyoro rwaMwari, rwakanga rwakatemwa pamahwendefa.
Jesu aivapa chidzidzo chakadzama pamusoro pekukosha kweMurairo kuti usimudzire hunhu hwevanhu.
Mutemo wakanyorwa pamabwe hauna kugona kuita kuti maJuda vave vanhu vakanaka.
Jesu akati “Imi munoda kunditeya pane chimwe chinhu pamusoro pemutemo. Asi onai kuti ndini dzakambonyora Mutemo pekutanga.
SaMwari baba, nemunwe wangu, ndakanyora gumi remitemo remuRairo pamabwe.
Ndichitarisa kubva parudo rwenyu rwekuvuraya mukadzi uyu, mutemo wakatadza kukuitai vanhu vari nani.
Zvino seMwanakomana waMwari ndakuita chinhu chekutambisa nguva kunyora mitemo ine gumi pasi. Mhepo nemvura netsoka dzevanhu zvichadzima zvandiri kunyora. Saka chinhu chisina maturo. Chii chandinofanira kuzviitira panyika?
Chikonzero chekutanga ndechekuti ndikutaridzei kuti Murairo waMosesi hauna maturo zvakadii muzvikamu zvekushandura hunhu hwevanhu.
Eksodo 32:19 Zvino wakati aswedera kumisasa, akaona mhuru nokutamba. Ipapo shungu dzaMosesi dzikamuka, akakanda mahwendefa aiva mumaoko pasi, akaaputsa mujinga megomo.
Mosesi akatsamwa kwazvo kuti vaive vakundikana nekukasika vachidzokera muzvivi zvekuti akakandira mabwe pasi nekurwa kukuru zvekuti akaparadza mabwe iwayo.
Saka Mosesi akava munhu wekutanga kuputsa gumi remitemo.
Zvakadaro kumuprofita mukuru uyu zvekuti vakuru vezvitendero vaiti ndiro raive simba ravo rekupedzisira pamusoro pake.
Chechipiri, kana dombo rikaputsika rikafufunyuka rinoita zvidimbu zviduku nezviduku totenda mhepo, mvura nemamiriiro ekunze, apo dombo iri rinoguma rava ivhu. Pasi kana ivhu ringori dombo rakafufunyurwa nemamiriiro ekunze.
Mufananidzo uri pamusoro apa unoratidza kuti dombo rinoparara sei zvishoma nezvishoma richiguma rava ivhu.
Mosesi akaratidzira kukundikana kweMurairo, achishandura dombo rakanyorwa gumi remutemo kuita zvidimbu zviduku zviduku zvaizoita ivhu.
Kunyora Murairo pabwe zvairatidza kuti kwaive kutambisa nguva. Zvaisazoshandura hunhu hwevanhu. Vaizongoputsa gumi remutemo.
Zvino nekuda kweizvi Jesu akati, “SeMwanakomana waMwari ndinonyora mitemo ine gumi muvhu maisina chakanaka chaichaita sezvo chero zvaainyora ipapo zvaisazogara kwenguva refu”.
Isu vanhu takazadzwa nezvivi kuti titerere chitsama chemirairo inotibatsira. Tinotozviuraya mumigwagwa nekuda kwekuramba kwedu kuterera mitemo yemumigwagwa yakaita semiganhu yekumhanya kwemotokari uye zvikwangwani zvinotiudza pekumira.
Johane 8:7 Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka, akati kwavari:: Usine chivi pakati penyu, ngaatange kukanda ibwe kwaari.
Mukadzi aive aputsa mutemo mumwechete. Vakakumbira mvumo kubva kuna Mosesi kuti vamuvuraye.
Asi iye Mosesi pachake aive aputsa mitemo yese. Asi Mwari haana kuuraya Mosesi.
Jesu akabva ataura kuti munhu asina zvivi aive nemvumo yekukanda dombo rekutanga. Asi vose vaive vatadza. Sevamwe vanhu vose. Saka chikwata chevanhu vakazara zvivi vangaruramisirwa chii nekuvuraya mukadzi mutadzi? Poto yaidaidza ketero kuti yakasviba asi zvigere pachiutsi chimwechete.
Chikonzero chakatsamwisa Mosesi zvakanyanya chaive chekuti maJuda aive akurudzira muprista wavo mukuru Aroni kuti vagadzire mufananidzo wakashama.
Eksodo 32:25 Zvino Mosesi wakati aona kuti vanhu varasa Jehovha, nokuti Aroni wakanga avarasisa, kuti vasekwe navavengi vavo,
Mukadzi aipomerwa aive akashama paaifeva. Asi ndizvo chaizvo zvaingoitwa nemaJuda ese pavakatanga kugamuchira Murairo.
Saka Murairo hauna kubvira washandura hunhu hwevanhu. Rudo rwekutadza runopisa zvakaipisisa mumoyo yevanhu.
Johane 8:8 Akakotama zve, akanyora pasi.
Kudzokorora kusingafungidzirwi kwekuita kwake kwaaive amboita pekutanga.
Vanhu vaive vatanga kuenda vaive vakurirwa. Saka paive pasina chikonzero chingafungwe nemunhu chaainyorera pasi zvakare.
Jesu aive avaparadza zvakazara saka vaive vasisina imwe sarudzo kunze kwekuenda. Asi kukunda nyaya iyi, Jesu akabva atanga kunyora zvakare muvhu. Aidzokorora kuita chinhu chisina maturo kuvanhu ichi. Nei? Nekuti kunyora gumi remitemo pamabwe hakuna chakwakashandura vanhu kuti vave nani uye zvakafanana, kunyora gumi remitemo pasi hapana wakwaizoshandura zvakare.
Asi mitemo ine gumi yaive yanyorwa ruviri pamabwe naMwari.
Eksodo 34:1 Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, "Zvivezere mahwendefa maviri amabwe akafanana nookutanga, kuti ndinyore pamahwendefa mashoko aya akanga ari pamahwendefa okutanga awaputsa.
SaMwari Baba, Jesu akanyora mitemo ine gumi ruviri nemunwe wake pamabwe.
SeMwanakomana waMwari akabva anyora kaviri nemunwe wake pasi.
Johane 8:9 Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikavarova, vakabuda mumwe-mumwe, kutanga vakuru kusvikira kuno wokupedzisira; Jesu akasara ari oga, nomukadzi wakanga amire pakati pavo
Jesu akaponesa mukadzi aive akurasikirwa nehupenyu hwake. Mukadzi mucherechedzo wekereke. Saka Jesu pachake ndiye Muponesi wekereke.
Hakuna muprofita mukuru anogona kuponesa kereke – asi Jesu ega anova Shoko raMwari.
Jesu aifanira kufa pamuchinjikwa kuti ropa rake risuke kereke. Zvino Mweya Mutsvene mukuru, hupenyu hwaive muRopa rake, hwaizouya hworarama mumoyo yedu yakatendeuka kuti atitungamirire muzvokwadi yese.
Johane 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose; nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura, vuye uchakuparidzirai zvinovuya.
Vakuru vezvitendero vemazuva iwayo vaishandisa mazwi avakabata paitaura muprofita Mosesi kuti vapikise Jesu (Shoko) mukuedza kwavo kuuraya mukadzi (mucherechedzo wekereke). Nhasi vafundisi vemharidzo vanoshandisa mazwi avakanzwa achitaurwa nemuprofita Branham kurwisa Magwaro vachibvisa kereke paMagwaro, zvinouraya kereke pamweya.
Asi kwaive neimwe nhanho imwechete kuhurongwa hwaMwari nerudzi rwevanhu.
Dombo nekuda kwenguva rakazova ivhu , asi ivhu rakazovei?
Adamu akaitwa neguruva renyika.
Genesisi 2:7 Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.
Pakarepo rimwe guruva remumunda weEdeni rakatanga kuita munhu. Chishamiso chikuru.
Saka kubva muguruva Mwari akaita miviri yevanhu. Saka moyo yedu yakaitwa neguruva renyika.
Miviri yedu inowana zvese zvinovaka miviri zvainoda kubva muchikafu. Mhuka dzinodya miti nemirivo kuti dziwane zvese zvinovaka miviri zvadzinoda kubva kuguruva. Saka, zvakadaro, zvese zviri miviri yedu, zvinobva kuguruva renyika.
Jeremia 31:31 "Tarirai, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, andichaita sungano itsva neimba yaIsiraeri, neimba yaJudha.
33 Asi heyi sungano yandichaita neimba yalsiraeri shure kwamazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Jehovha, `Ndichaisa murayiro wangu mukati mavo, ndichaunyora pamoyo yavo; ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu.'
VaHeberu 12:24 NokunaJesu, Murevereri wesungano itsva,
2 VAKORINTE 5:17 Saka kana munhu ari munaKristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuvura; tarirai, zvose zvava zvitsva
Mwari anoda kuita sungano itsva yeTestamente Itsva nevanhu vese apo Mwari anonyora murairo wake mumoyo yedu zvinozotipa rudo rwakadzama kuti tirarame nemirairo yake. Izvi zvinotiita vanhu vatsva. Mwari anoda kutiita vanhu vari nani.
Saka moyo unofanira kuputswa. Moyo yedu yakaputsika ndiyo inodiwa naMwari.
Moyo yevanhu yakaoma. Rudo rwekuuraya rwevanyori nevaFarise kuti vauraye mukadzi mutadzi rwaive humbowo hwaizvozvo.
Mwari anoda kuti moyo yakaoma yatinayo iputswe.
Chii chinoputsa moyo yedu? Kubvuma kwechokwadi uye kurwadziwa nezvivi.
Mwari anoda kunyora mirairo mumoyo yedu, asi moyo yedu inofanira kutanga yaputswa nekutendeuka nekupupura zvivi zvedu.
MABASA 2:37 Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamoyo, vakati kunaPetro nokunavamwe vaapostora: Varume, hama, tichaiteiko?
38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Moyo wakaputsika unenge uri muzvikamu zviviri, zvinomiririra mahwendefa maviri emabwe.
Kunze kwemoyo yedu hwakaomeswa nezvivi nekungofunga nezvedu chete.
Mwari anogona chete kunyora murairo wake munzvimbo dzemukati dzakapfava dzemoyo yedu yakaputsika. Zvino mirairo iyoyo inova zvikamu zvezvido zvedu zvepasi pasi pemoyo yedu. Mune mamwe mazwi tinoterera mirairo yaMwari nekuti tinoda kudaro, kwete nekuti tinofanira kudaro.
Kana moyo iyoyo ikaputsika mukutendevuka, Jesu seMweya waMwari, anonyora mirairo yake pazvidimbu zvakapfava zvemoyo yedu. Zvino saye, tinova nerudo nevatadzi uye rudo rwekuti naivo vaponeswewo.
Ipapo chete ndipo panenge pazadziswa zano raMwari muhupenyu hwedu.
Nei Mirairo yakanyorwa ruviri muTestamente Yekare?
Nekuti muTestamente Itsva Jesu seMweya waMwari akatanga kunyora murairo wake mukati memoyo yevatendi vekereke yake kana kuti Mwenga wake kubva mumakore 2000 enhorondo yekereke.
Kana kereke yechokwadi ikatorwa kukwira Kudenga paKuuya kwaShe, zvino maprofita maviri Mosesi naEria, vanoendesa Evangeri kuIsraeri kunotendeutsa maJuda 144000. zvino zvakare, kuboka rechipiri iri, Jesu anofanira kutangidza zvakare kunyora murairo wake mumoyo yeboka revanhu idzva iri, maJuda, vakaita sevaisamunzwa vakamuramba kwemakore 2000.
Kune mapoka maviri anogamuchira chokwadi muTestamente Itsva. MaKristu munguva nomwe dzemakereke vanobatanidzwa pakuvaka Mwenga waKristu nemaJuda 144000 vanouya munguva yeKutambudzika kukuru. Saka Jesu aive achifara kunyora ruviri pasi. Aiziva kuti aive nemapoka maviri akasiyana evanhu, maHedeni nemaJuda, avo moyo yavo yakatendeuka aifanira kuramba achishanda nayo. Asi murairo wakanyorwa pasi waizova murairo wakanyorwa mumoyo yevatendi vakaitwa neguruva renyika.
In the holy place in the Tabernacle, there was a seven-branched candlestick and a table of shewbread that had 12 loaves. Munzvimbo tsvene muTabernakeri, maive nezvigadziko zvemwenje minomwe netafura yechingwa chekuratidzira yaive nemarofu gomi nemaviri.
Zvaimiririra mapoka maviri akatariswa naMwari munguva yeTestamente Itsva.
Chigadziko chemwenje minomwe chinomiririra nguva nomwe dzemakereke emaHedeni.
Tafura yechingwa chekuratidzira inomiririra marudzi gumi nemaviri evaIsraei anodzokera kunaShe munguva yeKutambudzika kukuru apo maJuda 144 000 anodanwa.
Tinoona zviverengo zvakafanana izvi 7 na 12 zvichiratidzwa mumarangwanda emuviri wemunhu.
Kristu ndiye Musoro wekereke.
Dehenya kana kuti musoro wakabatanidzwa nemuviri nemabhonzo manomwe anodaidzwa muchirungu kutu cervical vertebrae anova mutsipa.
Mateo 27:33 Vakati vasvika panzvimbo inonzi Gorogota ndokuti nzvimbo yedehenya
Kristu akabatanidzwa neMuviri wake wevatendi paakafa kuti avaponese kubva kuzvivi zvavo. Izvi zvakaitikira paGorogota, nzvimbo yedehenya.
VaEfeso 5:23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuvo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri.
Dehenya rinomiririra Kristu sezvo iye ega ndiye Musoro wekereke.
Kupfuura nguva nomwe dzemakereke munguva yemakore 2000 enhorondo yekereke Kristu achaponesa muviri wevatendi, unodaidzwa kuti kereke yake. Pakupera kwekereke yechinomwe kuchave nerumuko vatsvene vachagamuchidzwa miviri isingazofuki kuvora, yakaitwa kubva pasi kana kuti neguruva renyika.
Pasi pemabhonzo manomwe evertebrae anoita mutsipa, tinowana mabhonzo gumi nemaviri anotevera anonzi thoracic vertebrae akabatanidzwa nembabvu.
Mumashure menguva nomwe dzemakereke, Mwari achadzokera kumarudzi gumi nemaviri evaIsraei munguva yeKutambudzika kukuru.
Kereke nemaJuda 144000 vachava neEvangeri rakanyorwa mumoyo yavo nemunwe waJesu paanoshanda ari Mweya waMwari mumoyo yevanhu vake.
Uhu ndihwo hurongwa hwaMwari muzano rake guru nerudzi rwevanhu.